अमेरिकी ‘कुख्यात अपराधी’ बेकरलाई नेपाल ल्याउला प्रहरीले?
अमेरिकी ‘कुख्यात अपराधी’ बेकरलाई नेपाल ल्याउला प्रहरीले? तेस्रो पटक रेड नोटिसका लागि इन्टरपोललाई पत्राचार
नारायण अधिकारी सोमबार, भदौ १५, २०७७, ०७:०६
काठमाडौं- २४ वर्षसम्म नेपालका डाँडापाखा, कुनाकन्दरा, हिमाल-तराई, छाँगा-छहरा छिचोल्दै समय बिताइदिए अमेरिकी नागरिक इयान बेकरले। जानकारहरूका अनुसार प्रकृतिप्रेमी बेकर घण्टौंमात्र होइन, हप्तौंसम्म एक्लै प्रकृतिमै हराउँथे। उनीहरूकै शब्द सापट लिने हो भने 'कोही बेला त उनी प्रकृतिसँग सवालजवाफमै उत्रन्थे'।
नेपालको कला, संस्कृति, धर्म, जातजातिको अध्ययनमा पनि उनी लीन हुन्थे। उनी जति समय नेपाल बसे, यिनै दुई चिज (नेपालको कलासंस्कृतिको अध्ययन र घुमघाम)मै समय बिताए।
उनको ख्याति यतिमा मात्रै सीमित थिएन। उनी अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत प्रख्यात थिए। र छन् अहिले पनि। उनले लेखेका दर्जर्नौं किताब ज्ञानका स्रोत मानिन्छन्। उनले दिएका प्रशिक्षणबाटै कतिपय विद्यार्थीको जीवन नै 'टर्निङ पोइन्ट' बन्न पुगेको छ।
हिमाल र तिब्बती संस्कृति, इतिहास, वातावरण र कलासम्बन्धी उनका दर्जन बढी किताब प्रकाशित भएका छन्। 'द हार्ट अफ द वर्ल्ड, 'अ जर्नी टु द लास्ट सेक्रेट प्लेस', 'सेलेस्टियल ग्यालरी', 'द टिबेटियन आर्ट अफ हिलिङ' र 'द दलाई लामाज् सक्रेट टेम्पल', 'टिबेटियन योगा'जस्ता प्रख्यात किताब उनै बेकरका कृति हुन्।
हिमालयन सेन्सस इन्स्टिच्युटका कार्यकारी बोर्ड सदस्यसमेत बनेका बेकर नेसनल जियोग्राफिक म्यागजिनमा लेख लेख्ने गर्छन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वातावरण र संस्कृतिका विषयमा प्रशिक्षणसमेत दिने गर्छन्। उनी लन्डन्स् कोर्टल्ड इन्स्टिच्युट अफ आर्ट, द रोयल जियोग्राफिक सोसाइटी, रोयल सोसाइटी फर एसियन अफेयर्स, एसिया सोसाइटी, स्मिथसोनियन इन्स्टिच्युट र नेसनल जियोग्राफी सोसाइटीसँग पनि आबद्ध छन्।
त्यसैगरी उनी नेसनल जियोग्राफी च्यानल, डिस्कभरी च्यानल, सिएनएन, बिबिसीलगायतका टिभी र रेडियोमा जियोग्राफीसम्बन्धी कार्यक्रममा आबद्ध छन्। वाइल्डलाइफ, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा अध्यात्म क्षेत्रमा काम गरेको उनी बताउने गर्छन्।
यिनै विख्यात अमेरिकी नागरिक बेकर नेपालको प्रहरीको भने 'मस्ट वान्टेड' सूचीमा छन्। नेपाल प्रहरीमात्रै होइन, १९४ देशका प्रहरी बेकरको पछि लागेको १२ वर्ष बितिसक्यो। तर उनलाई नेपाल ल्याएर कारबाही गर्ने प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन। पक्राउ परेर समेत छुट्ने ल्याकत राखेका बेकरलाई पक्राउ गरेर पुनः नेपाल ल्याउनकै लागि फेरि नेपाल प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बेकरलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय संगठन इन्टरपोललाई पत्राचारसमेत गरिसकेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले बताए। ‘बेकरविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्नका लागि केही दिनअघि नेपालस्थित नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसिबी)मार्फत् इन्टरपोलमा पत्राचार भइसकेको छ। रेड नोटिस भने जारी भएको छैन। रेड नोटिस जारी भइसकेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ एसएसपी कडायतले नेपाल लाइभसँग भने।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चर्चाको शिखरमा पुगेका बेकर नेपाल प्रहरीको 'मस्ट वान्टेड' सूचीमा कसरी परे? यसको जानकारी पाउन १२ वर्ष अगाडिको घटनामा फर्कनुपर्छ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन डिएसपी शेरबहादुर बस्नेतको टोलीले २०६५ जेठ ४ गते बालुवाटारको सममार्ग घर नम्बर ८०७ मा रहेको बेकरको डेराबाट वन्यजन्तुका आखेटोपहार र प्राचीन सामग्री बरामद गरेको थियो।
राजेश महर्जनको घर भाडामा लिएर बेकरले आखेटोपहार संग्रहालय जसरी नै राखेका थिए। उनले गैह्रीधारास्थित छेवान नोर्बु नेपालीको घरमा समेत कोठा भाडा लिएका थिए। जहाँ उनी आफू पनि बस्थे भने आखेटोपहार पनि भण्डारण गर्थे।
विख्यात व्यक्तिको कुख्यात कथामंगलबार, मंसिर ३, २०७६
बेकरका फर्निचरका सामान दुर्लभ वन्यजन्तुका अंग र सयौं वर्ष पुराना पुरातात्विक महत्वका सामग्रीले बनेका थिए। सोफामा चितुवाको छाला, खप्पर, सिंग, जंगली जनावरका नंग्राले बैठक कोठा सजाएका थिए। उनको डाइनिङ टेबलमा बाघको छाला बिच्छ्याइएको थियो भने चितुवाको छालाको सिरानी थियो।
यतिमात्रै होइन, उनले आफूले लगाउने कपडासमेत वन्यजन्तुको छालाबाट बनेका हुन्थे। ज्याकेट, टोपी, बेल्ट दुर्लभ जंगली जनावरको छालाबाट बनेका हुन्थे। त्यस्तै वर्षौं पूराना टुँडाल, भैरव, गजुर, तोरण, मूर्ति पनि प्रहरीले त्यसबेला बरामद गरेको थियो। आखेटोपहार र पुरातात्विक सामानसहित १ सय २२ थान सामग्री प्रहरीले त्यसबेला फेला पारेको थियो।
बेकरको कोठाबाट यी सामान बरामद गर्ने डिएसपी बस्नेत बढुवा भएर डिआइजीबाट अवकाशसमेत पाइसके। तर वन्यजन्तुको आखेटोपहारको संग्रहालय बनाएर राख्ने बेकर अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
फरार बेकरलाई पक्राउ गर्न त्यसबेला इलाका वन कार्यालय थानकोटले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी गार्ड, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेखेको थियो। त्यतिमात्रै होइन, प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोललाई समेत पत्राचार गरेर रेड नोटिस जारी गरिएको थियो।
उनीविरुद्ध पहिलो पटक सन् २००८ र २०१३ मा गरेर दुई पटक रेड नोटिससमेत जारी भएको थियो। एकपटक जारी भएको नोटिसको म्याद ५ वर्षसम्म मात्रै हुने भएकाले २०१३ मा पुनः जारी गर्नु गरेको थियो। २०१३ मा जारी भएको नोटिसको समेत म्याद सकिएको छ। तर उनी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। उनीमाथि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १८ र १९ विरुद्धको कसुर गरेको आरोप लागेको छ।
बेकर भुटान, थाइल्यान्डलगायतका एसियाली मुलुकमा आवतजावत गरिरहन्थे। तर पनि पक्राउ पर्न सकेका थिएनन्। तर उनी सन् २०१७ जुन १७ मा ग्रिसको एथेन्समा पक्राउ परेका थिए। उनी पक्राउको कारण भने नेपालस्थित नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसिबी)को पत्रमार्फत् जारी भएको रेड नोटिस नै थियो।
त्यसपछि उनलाई नेपाल ल्याउन पहल पनि भयो। तर बेकर र उनका कानुनी सल्लाहकारले रेड नोटिस नै अवैधानिक रहेको तर्क गरे। अन्ततः रेड नोटिसलाई नै अवैध ठहर भयो। बेकर पक्राउ परेपछि ग्रिस प्रहरीले नेपालमा सुपुर्दगीका लागि सम्पूर्ण सक्कल अदालती कागजात कूटनैतिक माध्यमबाट ग्रिसको कानुन मन्त्रालयमा पठाउन भन्दै इन्टरपोल एथेन्सबाट पत्राचार गरेको थियो।
उक्त पत्र आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, इन्टरपोल शाखाले ती कागजात जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंसँग माग गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् ग्रिस पठायो। कागजात पाएपछि इन्टरपोल महासचिवालयले वन कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय भएको भन्दै वनको सिफारिसमा जारी भएको रेड नोटिस नै अवैधानिक ठहर गरिदियो। पक्राउ परे पनि बेकरलाई नेपाल ल्याउन सम्भव भएन।
वन कार्यालयको सिफारिसमा जारी भएको रेड नोटिस अवैधानिक भएपछि जिल्ला अदालतको सिफारिसमा रेड नोटिस जारी गरिदिनका लागि अहिले इन्टरपोलमा पत्राचार भएको एसएसपी कडायतले बताए।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरको मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्ने कानुनी प्रावधान भएकोले यस मुद्दाको कार्यक्षेत्र पनि जिल्ला अदालत हुने भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको सिफारिसमा बेकरविरुद्ध तेस्रो पटक रेड नोटिसको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कागजात पेस भएपछि २१ दिनभित्र उपस्थित हुने बेकरलाई अदालतले आदेश दिएको थियो। तर उनी अदालत उपस्थित भएका थिएनन्। त्यसपछि रेड नोटिसको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अहिले भने इन्टरपोललाई पत्राचार समेत गरिसकिएको प्रहरी हेडक्वार्टरले जनाएको छ।
सैनिक मञ्चमा फूलपाती बढाइँ [फोटो फिचर] सो अवसरमा सेनाले फूलपाती बढाइँ कवाजअन्तर्गत राइफलबाट छिटो लहरे र एकठ्ठा बढाइँ गर्‍यो। तोपबाट पनि लहरे र एकठ्ठा बढाइँ प्रस्तुत गरियो।... शुक्रबार, कात्तिक ७, २०७७
किन मनाउन थालिएको छ महिषासुर सहादत दिवस, के महिषासुर राक्षस नभई राजा थिए? विजया दशमी, दशैं, दुर्गापूजा, दशहरा, नवरात्री आदि नामले विश्वका हिन्दुहरुले पर्व मनाइरहेका छन्। दुर्गाले 'राक्षस' महिषासुरको हत्या ग... शुक्रबार, कात्तिक ७, २०७७
२४ घण्टामा थप २ हजार २२५ जनामा कोरोना संक्रमण‚ १ लाख ५५ हजार २३३ पुगे संक्रमित शनिबार, कात्तिक ८, २०७७
नागरिकको उपचारको जिम्मा लिनु सरकारको अनिवार्य दायित्व हो : खिलराज रेग्मी शनिबार, कात्तिक ८, २०७७
गण्डकीमा ६ हजार ४५९ कोरोना संक्रमित शनिबार, कात्तिक ८, २०७७
ओली–गोयल भेट नेकपाले पाएको मतको अपमान हो : डा उद्धव प्याकुरेल [अन्तर्वार्ता] शुक्रबार, कात्तिक ७, २०७७